Iimpawu kunye nomnqweno wedumbo octopus | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngemollusk ehlala phakathi kwe-2000 kunye ne-5000 yeemitha ubunzulu. Imalunga nayo dumbo octopus. Nangona kungekho nto ingako yaziwayo malunga nale ntlobo, iyaziwa kakhulu ebantwini ngokufana kwayo nedumbo. Ijongeka iluthuthu kuba ukukhanya kwelanga akufikeleli kubunzulu obuhlala kubo. Inempawu ezizodwa kusapho lwayo kwaye yaziwa ngokuba yingwane enembonakalo ekhethekileyo.
Siza kunikezela eli nqaku kwi-dumbo octopus ukuze kutyhilwe iimfihlo zayo okwangoku.
3 Ukuziphatha kwe-dumbo octopus
4 Indawo yokuhlala
5 Ulondolozo lwe-dumbo octopus
Indlela yakhe yokuziqhubela, mhlawumbi, lolona phawu lukhethekileyo analo kusapho lwakhe. Indlela eziqhubela ngayo ngokwayo inokuyenza ivele ngaphandle kwesihlwele ngokulula. Kwindawo yayo yokuhlala yendalo sinokufumana iimfihlakalo ezininzi ezingaziwayo kude kube ngoku ukukhanya kwelanga akufikeleli apho.
Esi silwanyana asikaziwa ngabantu. Nangona kunjalo, siza kutyhila kuwe yonke into eyaziwayo ukuza kuthi ga ngoku. Umzimba wale ntlanzi unomdla kakhulu. Zonke ezinye ii-octopus zineentente ezinde kwaye ziyancedana ngokuhambisa amanzi. Esi silwanyana sinamaphiko aliqela emacaleni entloko asisebenzisa ukudada. Oku akuqhelekanga kwii-octopus ezaziwa ngcono. Amaphiko ajikelezwe kwaye ayakwazi ukuhamba ngendlela esikhumbuza ngeDumbo. Ingathi wayeneendlebe ezimbini ezinkulu ezifana nale ndlovu yeDisney eyayikwazi ukubhabha ndibulela iindlebe zayo ezinkulu.
Le ngwane ayisiyiyo kuphela iindidi ezikhoyo kwezi mpawu. Benza udidi olupheleleyo oluneentlobo ezili-13 ezahlukeneyo ukuza kuthi ga ngoku. Zonke ezi ntlobo zibonisa i-webbed tent tent kunye namaphiko kwiintloko zazo, ke into eyahlukileyo ihlala ihleli. Ezi ntlobo ziginya ixhoba lazo lonke endaweni yokuziqhekeza kwaye zilophule njengabanye octopus.
Bahlala ezinzulwini zolwandle kwaye, kuba ayisiyondawo ifikelelekayo, akukho nto ingako yaziwayo malunga nabo. Asiyondawo ifikelelekayo kakhulu kuba uxinzelelo lweatmosfera lukhulu kakhulu kwaye izixhobo noomatshini bayadingeka ukuyixhasa kwaye, ngaphezulu koko, akukho kukhanya. Ubungakanani obuqhelekileyo beentlobo abaziwa kakuhle kwaye kutshanje kuye kwenzeka nje ukuba baqwalasele ukuba banjani abantwana babo. Kunzima ukwazi ukuba zizala njani.
Kuqapheleke emva kophando oluthile ukuba zimhlophe ngethoni ebala kakhulu. Kungenxa yokuba ukungabikho kokukhanya kwindawo yokuhlala akukwenzi ukuba kufuneke ukuba baphuhlise naluphi na uhlobo lombala kulusu. Umzimba unobumba be-gelatinous njengoko ufuna ukukwazi ukumelana namanqanaba aphezulu oxinzelelo lwendalo ezivela ngeenxa zonke. Ukuba awunalo ulusu olufana nejeli, ngekhe uphile.
Ubungakanani kunye nobunzima bezinto ezigciniweyo azaziwa kakuhle. Olona hlobo lukhulu lubhalisiweyo lunobunzima obumalunga neekhilogremu ezili-13 kwaye phantse lwaluziimitha ezimbini ubude. Oku akuthethi ukuba zonke iikopi zinje. Into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba kukho iindidi ezinabantu bazo abaphakathi kuluhlu oluphakathi, kodwa zihlala zikhona ezingaphezulu komndilili. Kuqikelelwa ukuba umndilili uhlala malunga ne-30 cm ubude, nangona ubunzima bayo abaziwa kakuhle.
Ukuziphatha kwe-dumbo octopus
Kuba iimpawu zayo zibuthathaka kuba kunzima ukwazi ngayo, cinga indlela eziziphethe ngayo. Kuyamangalisa kuba kubunzulu kunzima ukufumanisa. Ekuphela kwento eyaziwayo kukuba bahlala kwiindawo ezinzulu ezinkulu kwaye baqhutywa ukusuka kumaphiko abo afana nentloko. Ukutya okuphambili okubandakanya ukutya kwabo kuyaziwa ngokubanzi. Zidla ngokutya ii-crustaceans, ii-bivalve, kunye nezinye iintshulube. Ngelixa ziqhutywa, zigcina ibhalansi ngenxa yentshukumo yamaphiko. Ngokusetyenziswa kweethende baziva ukuba ngumgangatho wolwandle, amatye okanye iikorale. Le yindlela abajonga ngayo amaxhoba abo. Nje ukuba bayifumanise, bawela phezu kwabo kwaye babagubungele.
Njengokuba kungekho kuninzi kunokwaziwa malunga nabo, kubonakala ngathi akukho nqanaba apho bazala khona ngendlela emiselweyo. Abafazi bathwala amaqanda ngokwamanqanaba ahlukeneyo okukhula. Amaqanda angaphakathi. Xa iimeko zokusingqongileyo Ziyathandeka ngakumbi ukuze kubekho amathuba amakhulu okuphumelela, enye yazo ichumise kwaye iyifake.
Xa amantshontsho ekugqibeleni eqanduselwa eqandeni, azalwa ekhule ngokupheleleyo kwaye angazimela. Kwezi ndawo zinobutshaba azinakho ukuchitha ixesha kufuneka zikhule kancinci kancinci kwaye zifunde kunina. Bamele bazimele ngokwabo kwasekuqaleni.
Olu hlobo lufunyenwe kubunzulu bokuba ukusuka kwi-2000 yeemitha ukuya kwi-5000 yeemitha. Ayaziwa ukuba bahlala phantsi ngaphantsi. Ewe, yindawo yokuhlala enobutshaba apho ukukhanya kwelanga kungafikeleli kwaye kukho uxinzelelo lomoya omkhulu wokumelana nalo.
Njengoko ingaziwa ngokupheleleyo ngayo, kukholelwa ukuba olu hlobo lunokuhlala kuwo wonke umhlaba. Kufunyenwe kwiindawo ezahlukeneyo apho bakhoyo Unxweme lwePasifiki nolweAtlantiki eMntla Melika, kwiiPhilippines Islands, kwiiAzores Islands, eNew Zealand, Australia, New Guinea, njl. Ke ngoko, kucingelwa ukuba i-dumbo octopus ayinakukhetha uhlobo oluthile lolwandle okanye olunye.
Ulondolozo lwe-dumbo octopus
Umntu akanako ukwenza kubunzulu obukhulu apho sifumaneka khona esi silwanyana. Ke ngoko, ayinakubasongela ngokuthe ngqo ukusinda kwabo. Nangona kunjalo, isongelwa ngakumbi ziziphumo zokutshintsha kwemozulu kunye nokunyuka kwamaqondo olwandle. Ungcoliseko lwamanzi luyingxaki, kuba inkunkuma inokuhla iye kwindawo yayo.
Ukuze uphile, kufuneka ii-octocorals zibe sempilweni entle kubafazi ukuba babeke amaqanda abo. Ezi coral zichaphazeleka kukutshintsha kwemozulu.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi lukunceda ukuba wazi ngakumbi nge-dumbo octopus kunye nomdla wayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Dumbo octopus